बल्ल आयो अस्पतालको भित्री रहस्य, राति १२ बजेनै यस्तो भएको रहेछ, को हो दोषी ? – Complete Nepali News Portal
बल्ल आयो अस्पतालको भित्री रहस्य, राति १२ बजेनै यस्तो भएको रहेछ, को हो दोषी ?
ScotNepal September 23, 2020
काठमाडौँ | कर्तव्यज्यान मुद्दामा केन्द्रीय कारागारमा रहेका रुपन्देहीका एकजनाको मृ,,’त्यु भएपछि विवाद सिर्जना भएको छ। कर्तव्यज्यान मुद्दामा केन्द्रीय कारागार सुन्धारा काठमाडौंमा विगत केही वर्षदेखि कैदभुक्तान गरिरहेका रुपन्देहीको भैरहवाका ६३ वर्षिय रामलखन जयसवालको गत शनिबार मृ,,’त्यु भएको हो। दीर्घरोगी रहेका जयसवालको उपचारको क्रममा मृ,,,’त्यु भएको केन्द्रीय कारागारले जनाएको छ। ‘कारागारमा नै उहाँको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको थियो, शनिबार राति पौने १० बजे अस्पताल लगेका थियौं, भर्ना गरेको केही मिनेटमै उहाँको मृ,,’त्यु भएको हो’–कारागार श्रोतले भनेको छ।
वीर अस्पताल काठमाडौमा उपचारकै क्रममा मृ,,’त्यु भएको जेल प्रशासनले जनाएपनि जयसवाल परिवारले हत्या भएको दाबी गरेको छ। उनको कारागारमै मृ,,’त्यु भइसकेपछि अस्पताल ल्याइएको हो या अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृ,,’त्यु भएको हो भन्ने विषयमा शंकास्पद भएको उनको परिवारको भनाई छ। हेर्नुहोस
40 लाख लिएर श्रीमती फरार (भिडियो सहित)